Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): အတတ် နှင့် ပညာ
ဤဆောင်းပါးသည် အတတ်ပညာ သင်ကြားလေ့လာ နေကြသော လူငယ်၊ လူရွယ်၊ ပညာရှင်၊ ပညာသင် တို့ အကျိုး အတွက် ရည်ရွယ် ပါသည်။
လောက ၌ အတတ်မျိုးစုံတို့ ရှိကြပါသည်။ ကောင်းသော အတတ်ပညာများ ရှိသလို၊ မကောင်း သော အတတ်ပညာ များလည်း ရှိနေကြ၏။
ဤနေရာတွင် အတတ်၊ နှင့် ပညာကို ခွဲခြား နားလည်ရန် သာဓက တို့ဖြင့် ပြဆောင် ရှင်းလင်း ပေးပါမည်။
ဇာတ်တော် တစ်ခုတွင် မြေခွေး တစ်ကောင် သည် အခြားသော တိရစ္ဆာန်များကို ခိုင်းစေ ထိမ်းကျောင်း နိုင်သော ပထ၀ီ ဇယ မန္တန်ကို အကြောင်း ကြုံကြိုက်၍ တတ်မြောက်သွား၏။ ထို့နောက် ထိုမြေခွေးသည် သူ၏ တစ်သက်တွင်ပင် မော်၍ ပင် မကြည့်ရဲသော ခြင်္သေမင်း တို့ကိုပင် အမိန့်ပေး စေခိုင်း နိုင်ခြင်းဖြင့် - အတိုင်းအဆ မဲ့သော တန်ခိုး စွမ်းအားကို ရပြီဟု ယုံကြည်ကာ ဗာရာဏသီပြည်ကို စစ်ပြုရန်ပင် ကြိုးစားခဲ့၏။
ထိုအတတ်၏ စွမ်းအားကြောင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တန်ခိုး အာဏာ ကြီးထွား ခဲ့သော်လည်း၊ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် တွေးခေါ် နိုင်သော ပညာ ကင်းမဲ့မှုကြောင့် ထိုမြေခွေးသည် သေဆုံး ပျက်စီးခဲ့ရ၏။
ထိုနည်းတူ- သေသော သတ္တ၀ါတို့ကို ပြန်လည် အသက်ဝင်စေသော မန္တန်ကို တတ်ရာမှ ကျားသေ ကို အသက်သွင်းမိသဖြင့် မိမိအား ပြန်လည် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံရသော ပုဏ္ဏား လုလင် ငယ် အကြောင်း၊ ရတနာ ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာစေသော မဟာ ဝေဒဗ္ဗ မန္တန်ကို တတ်သော်လည်း၊ အခြေအနေ အချိန်အခါကို နားလည်နိုင်သော ပညာဥာဏ် ကင်းမဲ့သော ကြောင့်- ဓါးပြ တို့လက်တွင် အသက်ဆုံးခဲ့ရသော လုလင် အကြောင်း တို့ကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာ လူငယ်တို့ ကြားဖူးကြမည် ထင်ပါသည်။
အတတ်သည် - သာမာန် အတတ်ကို တတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် အနိမ့်ဆုံး အဆင့် စားဝတ် နေရေးကို ပေး၏။ ထူးခြား ထက်မြက်သော အတတ်ကို တတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် တန်ခိုး အာဏာ ကြီးထွား စေမှုကို ပေး၏။ လွန်စွာ ထူးခြားသော အတတ်ကို တတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် - လွန်စွာ ထူးခြားသော ဘုန်းတန်ခိုး စွမ်းရည် သတ္တိတို့ကို ပေး၏။
လူ့လောကတွင် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ အတတ်မျိုးစုံတို့ကို မြင်တွေ့ရ၏။ ထမင်း၊ ဟင်း ချက်ခြင်း၊ မုန့်လုပ်ခြင်း၊ ဘာသာစကား ပြောဆိုခြင်း တို့ မှ စ၍၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ ပြင်ဆင်ခြင်း စသည်တို့ အထိ အဆင့်မြင့်မားသော အတတ်ပညာ များစွာတို့မှာ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ နေရသော အတတ်များ ဖြစ်ပါ၏။
သို့သော် အတတ်သည် ပညာ မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်သော်လည်း- အတတ်သည် ပညာနှင့် သီးခြား လည်း ဖြစ်မနေပါ။ အတတ်၏ နောက်ကွယ်တွင် - အကျိုးအကြောင်းတို့ကို ဆက်စပ်သော၊ ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်းသော ပညာတို့ရှိ၏။
အတတ် တို့သည် ပညာမှ စီးဆင်း လာကြသလို- အတတ်တို့ကို ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ်ခြင်း၊ ပြန်လည် စိစစ်တွေးခေါ်ခြင်း၊ တို့မှလည်း ပညာကို ပြန်လည် ရရှိနိုင်၏။
ဥပမာ- မော်တော်ကားကို သီအိုရီ ဖြင့် တွက်ချက် ဒီဇိုင်းဆွဲသော ပညာရှင် တစ်ဦးသည် ကားပြင် တတ်ချင်မှ တတ်ပါမည်။ ထိုနည်းတူ ကားပြင်တတ်သူ မက္ကင်းနစ် တစ်ယောက်သည် လည်း မိမိပြင်သော ကား၏ နောက်ကွယ်မှ အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်မှု (Chemical Energy မှ Mechanical Energy ပြောင်းလဲလာပုံ) တို့ကို နားလည် နိုင်ချင်မှ နားလည် ပါမည်။
သို့သော်- ၀ါရင့်လာသော၊ တနည်းအားဖြင့် မိမိကြုံတွေ့လာရသော အတွေ့အကြုံ တို့ကို ပေါင်းစု စိစစ်၍၊ ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ် ဆင်ခြင်တတ်သော မက္ကင်းနစ် တစ်ယောက်သည်- ကားတစ်စီး ၏ အတွင်းသဘော ပညာကို ထိုးထွင်းနားလည် လာနိုင်ပါ၏။
ဆိုလိုသည်မှာ- အတတ်သည် - လေ့ကျင့် သင်ကြားမှု သဘောဖြစ်၏။ တစ်စုံ တစ်ယောက်က တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားပေးနိုင်၏။
ပညာသည် အကျိုးအကြောင်း ဓမ္မသဘောတရား ဖြစ်၏။ ပညာတွင် ဆိုးသည်၊ ကောင်းသည် ဟူ၍ မရှိ၊ ဆက်စပ် ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘောတရားသာ ရှိ၏။ ပညာသည် အလွယ်တကူ လက်ဆင့်ကမ်း၍ မရပဲ- မိမိကိုယ်တိုင် ကြောင်းကျိုး ဆင်ခြင်မှု၊ လေ့လာစူးစမ်းမှု၊ ခြုံငုံ သုံးသပ်မှု တို့မှ လာသည် ဖြစ်သောကြောင့်- ပရိနိဗ္ဗာန သုတ်တော်တွင် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူသည့် အတိုင်း “အတ္တာဟိ အတ္တာနော နာထော” မိမိကိုယ်သာ အဓိက အားထားရာ ဖြစ်၏။
အတတ်ကို ကျွမ်းကျင်သော အခါ- “အထုံ” ဖြစ်၏။ ပညာကို စွဲနစ်သော အခါ- “ပါရမီ” ဖြစ်၏။
သိုင်းသမား တစ်ယောက်သည် စဉ်းစား စရာ မလိုပဲ- ရန်သူမှ ချောင်းရိုက်လိုက်သော ဒုတ်ကို ပုတ်ထုတ်၊ ရှောင်ထွက် နိုင်ခြင်းသည် အတတ်ကို ကြိမ်ဖန် များစွာ ကျင့်ကြံထားသော “အထုံ” သဘော ဖြစ်၏။ “အထုံ” ဆိုသည်မှာ မွမ်းမံ လိမ်းကျံထားသည် ဆိုသော အနက်ရှိ၏။
သို့သော်- ထိုအတတ်မှ တစ်ဆင့်တက်၍ ပညာရှင် ဖြစ်သွားကြသူတို့သည် - ထိုအတတ်၏ နောက်ကွယ်မှ ပညာကို ရရှိသွား၏။ ဤသည်ကို သိမြင်ခြင်း “၀ိဇ္ဇာ” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်၏။ “၀ိဇ္ဇာ” ဆိုသည်မှာ မြေလျှိုး၊ မိုးပျံနေခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်၊ ထိုသို့ ထိုးထွင်း ပေါက်မြောက်စွာ သိသွားသူတို့ကို အနောက်တိုင်း ပညာရှင်တို့ကို “Enlignten ones” ဟု ခေါ်၏။ အလင်းရောင် ရသွားသူများဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
လူ-လူချင်း ထိုးနှက် ရိုက်ပုတ်သော ကိုယ်ခံ ပညာကိုပင် လေ့ကျင့် သင်ကြား ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြသော ကရာတေး ၏ ဖခင် ဖြစ်သူ ဆရာကြီး ဂစ်ရှင် ဖူနာကိုချိ မှာ ပြောခဲ့သည်မှာ- “ကရာတေး” ဆိုသည်မှာ “ဗလာ လက်” ဖြစ်၍၊ “ဗလာ စိတ်” ထားနိုင်ရန်၊ “လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ” တို့မှ ကင်းဝေးရန် အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့၏။
ထိုနည်းတူ- တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ချုပ်နှောင် ကိုင်ပေါက်သော အိုက်ကီဒို ပညာကို တီထွင်ခဲ့သူ ဒေါက်တာ မိုးရေးဟိ မှ - “မုန်းတီးမှု များသူသည် ဤပညာကို မတတ်မြောက်နိုင်” ဟု ဆိုခဲ့၏။ ရန်သူ အများနှင့် တစ်ယောက် သတ်ပုတ်ရာတွင်- ဒေါသဖြစ်လျှင်၊ ကြောက်လန့်လျှင်၊ မိမိကိုယ်မိမိ အထင်ကြီးလျှင်၊ အစွဲအလန်း ထားမိလျှင်- သေနိုင်သော အမှားဖြစ်၏။ ၀င်လာသော ဒါး၊ ဒုတ်၊ ခြေကန်ချက်၊ ထိုးနှက်ချက်တို့ အပေါ်တွင် - တစ်ခု ရောက်လာလျှင်- ရောက်လာသော အချိန်အခိုက် အတန့်လေးတွင်သာ- လိုအပ်သော တုန့်ပြန်မှုကို ပေးလိုက်ပြီး၊ ထိုကိစ္စ အပေါ်တွင် စိတ်ထဲမှ လုံးဝ ပယ်ဖျောက်၍၊ နောက်တစ်ခု လာလျှင် လာသလို တုန့်ပြန်ရန် ထားရမည့် သဘောထားကို- ရှင်နာဂသိန်မှ မိလိန္ဒ မင်းကြီးအား ဖြေကြား ခဲ့သော စကားဖြစ်သည့်- “အရှင်မင်းကြီး- မှန်ရှေ.ကို ရပ်လျှင်၊ မှန်ထဲက အရိပ်ဟာ ချက်ချင်းပေါ်သလား၊ နောက်မှ ပေါ်သလား၊ မှန်ရှေ့က ထွက်လိုက် လျှင်ကော၊ မှန်ထဲက အရိပ်ဟာ၊ ချက်ချင်းပျောက်သွားသလား၊ နောက်ကျမှ ပျောက်သွား သလား” ဟူသော ဥပမာ အတိုင်းပင်- ကိုယ်ခံပညာရှင် ဆရာကြီးများက- ညွှန်ပြခဲ့၏။
ဤသည်မှာ- လူ-လူချင်း သတ်ပုတ်သော အတတ် ပင် ဖြစ်လင့်ကစား၊ နောက်ကွယ်မှ ပညာကို မြင်သွား သူတို့သည် ဗြဟ္မစိုရ် တစ်ရား တစ်ပါး ဖြစ်သော “ဥပက္ခာ” စိတ် (ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ တွယ်တာခြင်း၊ ကြောင့်ကြခြင်း တို့မှ ကင်းဝေးခြင်း) ထားသွား နိုင်ပုံကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်၏။
ကောင်းကင်တွင် လူသားတို့ ပျံသန်းနိုင်ရန် အတွက် ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို နှစ်မြုပ်ပြီး၊ လေယာဉ် တီထွင် ဒီဇိုင်းဆွဲမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သော၊ “ရိုက်ညီနောင်” တို့ထက်ပင် ပိုစောသည်ဟု ဆိုနိုင်သော ဘရာဇီး လူမျိုး “အယ်လ်ဘာတို ဆန်တို ဒူးပွန့်” သည် မိမိ၏ တီထွင်မှုကို လူသားတို့ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ရန် အတွက် စစ်ရေး ကိစ္စများတွင် အသုံးပြုလာကြခြင်းကို စိတ်ဆင်းရဲစွာဖြင့် မိမိကို မိမိ အဆုံး စီရင်သွားခဲ့၏။
ကောင်းမည် ထင်၍ ထူးခြားသော အတတ်ပညာကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သော်လည်း - မကောင်းသော နေရာတို့တွင် သုံးခြင်းသည် မူလ ပညာရပ်၏ ရန်သူပင် ဖြစ်ပါသည်။
အနုမြူ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး E=mc² ဖေါ်မြူလာကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းသည် - စွမ်းအင်၊ ဒြဗ်နှင့် အလင်း၏ အလျင်တို့ ဆက်စပ်မှု သဘောတရား ပညာကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူ ဖြစ်၏။ ထိုပညာတွင် ကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်း မရှိပါချေ။ ကြောင်းကျိုး ဆက်စပ်မှု၊ သဘာဝ ဓမ္မ တစ်ခုသာ ဖြစ်၏။
သို့သော် ၄င်းကို သုံး၍- လူ့လောက အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင် ထုတ်နှုတ် သုံးစွဲနိုင် ခြင်းသည် အတတ်ဖြစ်၏။ ထိုနည်းတူ လူပေါင်း များစွာကို သေကြေ ပျက်စီးစေနိုင်သော အနုမြူ၊ နျူကလီယာ စစ်လက်နက် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လည်း အတတ် ဖြစ်၏။
ကောင်းသော အတတ်နှင့် မကောင်းသော အတတ်သည်သာ ခြားနား၏။
တနည်းအားဖြင့် အတတ်သည် Application ခေါ် လက်တွေ့ အသုံးတည့်ခြင်းကို ဦးတည်၏။ ပညာသည်- Enlightenment ခေါ် ထွက်မြောက်ရာ အလင်းရောင် လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်၏။
လူတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးနေကြ၏။ ရာဇ၀တ် မှုခင်း ကျွမ်းကျင် သူများ၏ အဆိုအရ- ရာဇ၀တ်ကောင် အများစုသည် Repeated Offender ခေါ် ထပ်ပြန် တစ်လဲလဲ ကျူးလွန်ကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါ၏။ ဤသည်ကို ထိုသူ၏ Psychological Profile ဟု ခေါ်၏။ ထိုကြောင့်လည်း- တရားခံ မဖေါ်နိုင်သော မှုခင်းတို့ ပေါ်ပေါက် လာပါက- ကျူးလွန်ရာ နေရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခြေအနေ များအရ- ဖြစ်နိုင်သော ရာဇ၀တ်ကောင် တို့ကို မှုခင်း မှတ်တမ်းမှ ပြန်ကြည့်၍ မသင်္ကာဘွယ်များ စာရင်းတွင် ဦးစွာထည့်သွင်း လိုက်ရ၏။ နိုင်ငံတကာ စစ်တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်များတွင် အမေး အဖြေ အင်တာဗျူးများသည် ထိုသူ၏ Psychological Profile ကို စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်၏။ အမှား အမှန်ဟု၍၊ မရှိပဲ၊ ထိုသူ၏ အဖြေများမှ- ထိုသူသည် မည်သို့သော သူဖြစ်သည်ကို မှတ်တမ်းတင် လိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။
အတိတ်မှ မိမိတို့၏ ဘိုးဘွားတို့သည် လည်း သူတို့ သမိုင်း သူတို့ ရေးသွားခဲ့ကြ၏။ သူတို့၏ ဘ၀ အဖြစ်အပျက် တို့ကို လေ့လာ၍၊ အမှား အမှန်တို့မှ စိစစ် ဝေဘန် ပိုင်းခြား သင်ခန်းစာ ယူသော်- ထိုအမှားမျိုးကို မိမိတို့ ထပ်ပြန်ပြုမိ နိုင်ချေ နည်းသွားနိုင်၏။
“သမိုင်းသင်တာ မအ- အောင်လို့” ဟု ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်းသည် တိုတို နှင့် လိုရင်း အင်မတန် လေးနက်သော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် စကားကို ပြောခဲ့၏။ တွေးကြည့်လေ၊ တန်ဘိုး ရှိလေ ဖြစ်၏။
ဗီယက်နမ် တော်လှန်ရေး မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ ညာလက်ရုံး လက်ထောက်၊ စစ်သေနာ ပတိ ဖြစ်သူ- ဗို ငုယင် ကိယပ် (Vo Nguyen Giap) သည် ဟနွိုင် တက္ကသိုလ်တွင် သမိုင်း ဆရာဟောင်း ဖြစ်၏။ သူသည် ဟိုချီမင်း နှင့် လက်တွဲ၍- ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တွင် ဂျပန်တို့ကို တော်လှန်ခဲ့၏။ ပြင်သစ် တို့ကို အောင်မြင်အောင် ခုခံ နိုင်ခဲ့ ရုံသာမက၊ (ပြောက်ကျား စနစ်ကို- တိုက်ပွဲကြီး အသွင်ပြောင်းလျှင် သေချာပေါက် အနိုင်ရမည်ဟု ယူဆခဲ့သည့် ပြင်သစ်တို့သည် ကမ္ဘာကျော် ဒင်ဗင်ဖူး တိုက်ပွဲကြီတွင် အကြီးအကျယ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရ၏။ စကားချပ်) အမေရိကန် သမိုင်းတွင် - အမေရိကန် အနေဖြင့် အရှုံးပေးခဲ့သော အမေရိကန်- ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲကိုလည်း အောင်မြင် အောင် တိုက်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်၏။ သူသည် တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှ စစ်တက္ကသိုလ် မတက်ဘူးခဲ့၊ စစ်ပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု မရှိခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်၏။ အံ့သြခြင်းများစွာ တို့ဖြင့် အမေရိကန် စစ်ပညာရှင်တို့က ၄င်းအား မေးသော အခါ- “ဒါတွေ အားလုံး သမိုင်းမှာ ပါ-ပါတယ်” ဟုသာ ပြုံးလျှက် ပြောခဲ့၏။
ထို့ကြောင့်- သမိုင်း ဆိုသည်မှာ ကျက်ရမည့် စာများ မဟုတ်ပါ။ ရှေးလူတို့က ဘ၀နှင့် ရင်း၍ သင်ပေးသွားသော သင်ခန်းစာများမှ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် လေ့လာရမည့် ဖြစ်ရပ်များသာ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
“ဝေဒ” သည် “ဗေဒ” အင်္ဂလိပ် လိုအားဖြင့် “Veda” ဖြစ်၍၊ “Knowledge ” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရ၏။ ပညာ ကို ဆိုလို၏။ ထို့ကြောင့်လည်း-
စသည်ဖြင့် ပညာရပ် များတွင် “ဗေဒ” ကို ထည့်သွင်း အမည်ပေးထားရခြင်း ဖြစ်၏။
သို့သော် ထို “ဗေဒ” ကို မြန်မာများ နားလည်ထားသည့် “ဗေဒင်” ဆိုသည်မှာ “လက်ရှိ ဘာဖြစ်နေလဲ၊ ဘာတွေ ဖြစ်မှာလဲ” ကို မေးမြန်းစုံစမ်း၊ ဟောကြားသည့် Fortune Telling ဖြစ်နေ၏။
အမှန်က Fortune Telling များ- များစွာ ရှိ၏။ လ္ဘက်ရိုး၊ ကြက်ရိုး ကြည့်ခြင်း၊ စ၍ ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူ မေးခြင်းအထိ၊ နိုင်ငံ အလိုက်၊လူမျိုးအလိုက်၊ မူကွဲ ပုံစံကွဲ များစွာ ရှိ၏။
ထိုနည်း စနစ် အတတ်ပညာများတွင် အချို့သည် အလွန် အံ့စရာ ကောင်းအောင် မှန်၏။ သို့သော် အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်တွေးခေါ် နိုင်မှု မပါသော ရှေ့ဖြစ်ဟောနည်း တို့ကို “ဗေဒ” ဟု ခေါ်၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်လည်း အနောက်တိုင်းတွင် Fortune Teller နှင့် Astrologer တို့ကို သီးသန့် စကားလုံးများဖြင့် ကွဲပြားစွာသုံးနှုန်း၏။
မှန်တိုင်း ဆရာတင် ရမည် ဆိုသော် ပြီးခဲ့သော ကမ္ဘာ ဖလားပွဲတွင် တစ်ခါမှ မမှားသော ဟောကိန်းများ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ရေဘ၀ဲလေး “ပေါလ်” ကို ဆရာတင် ရမည် ဖြစ်၏။ ဤသို့ ဆို၍ ထိုနည်းများကို ဝေဘန်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းများကို အထင်မသေးပါ။
မိမိကျွမ်းကျင်သော ပညာဖြင့် - လူသားတို့ အခက်အခဲကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြသော ရှေ.ဖြစ်ဟော ဆရာ အားလုံးကို - ကိုယ်စိတ် နှလုံး သုံးပါး စလုံးဖြင့် လေးစား ပါ၏။ ယခု ပြောလို သည်က အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်မှုကို ညွန်ပြသော “ပညာ” ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်က- “စာကလေး ဗေဒင်” ခေါ်ကြည့်ဘူး၏။ အိမ်သား ၅-ယောက်ကြည့်၏။ ထိုစဉ်က တစ်မတ်ခန့်သာ ပေးရပါသည်။ စာကလေးသည် - သူ့သခင် ထုတ်ပြ ထားသော နေ့သား အလိုက် ဟောစာတမ်းများကို- ကျွန်တော်တို့ အိမ်သား အားလုံး အတွက် တစ်ယောက်မှ မမှားစေပဲ- သက်ဆိုင်ရာ နေ့အလိုက် မှန်ကန်စွာ ဆွဲထုတ်ပြနိုင်၏။ ဟောစာတမ်း မှာမူ နဂိုက ကြိုတင် ရေးထားသော ယေဘူယျ ဟောစာတမ်း သာ ဖြစ်၍- ဘာမျှ စိတ်ဝင်စားဘွယ် မရှိ။ စိတ်ဝင်စားဘွယ်က စာကလေး ဖြစ်၏။ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ရှေ့ လာထိုင်လိုက်သည် နှင့် မည်သည့် နေ့သား ကို သိနေသော ဗေဒင် ဆရာ သည် လူသာ ဆိုလျှင်- အင်မတန် နာမည် ကြီးမည် ဖြစ်၏။
နာမ်လောက၊ ပရ လောက ကို အသုံးပြု၍ လက်ရှိ အနေအထားကို တိကျစွာ ဟောနိုင်သူ၊ လေထဲမှ ဘုရား ဆင်းတုလေး ရောက်လာနိုင်သူ ဆရာတို့ အကြောင်းကို ဆရာ ဦးဆန်းလွင် (အသျှင် အာဒိစ္စ ရံသီ) မှ “ရတနာ သုံးပါး ကိုးကွယ် ယုံကြည်လာသူ တစ်ယောက် အကြောင်း” တွင် ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့၏။
ဤနေရာတွင်- “ဗေဒင် ပညာ” ကိုလေ့လာသူ မိတ်ဆွေများ၊ ညီအကိုများ အနေဖြင့်- မှန်ဘို့ ကိုသာ ဦးစားပေးမည်၊ တနည်းအားဖြင့် ရှေ့ပြေး ဟောပြောခြင်း အတတ်များကိုသာ စိတ်ဝင်စားမည် ဆိုလျှင် ရေဘ၀ဲလေး နည်း၊ စာကလေး ဗေဒင်နည်း၊ စသော နည်းများကို ကျင့်ကြံ လေ့လာနိုင်ပါ၏။
ကျိုးကြောင်း ဆက်စပ်သော၊ ပညာကို ရှာဖွေမည် ဆိုလျှင်တော့- ခက်ခဲသော လမ်းကို လျှောက်ရ ပါလိမ့်မည်။ နည်းစနစ် များကို လေ့လာခြင်း၊ တွက်ချက်ခြင်း၊ ပြီးခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များမှ ပြန်လည် စိစစ် သုတေသန ပြုခြင်းတို့ကို ပင်ပန်းစွာ၊ အချိန်ကုန်ခံ၍ လေ့လာ ရမည် ဖြစ်ပါ၏။
မည်သည့် နည်း (မည်သည့် အတတ်) ကို သုံးသည် ဖြစ်စေ- မိမိ အနေဖြင့် ရရှိသော လာသော အခြေအနေကို ကျေနပ် နိုင်ဘို့သာ လိုရင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။
အစွမ်းပြနိုင်သော “အတတ်” သက်သက်ကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့်- ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ အစွမ်းပြနိုင် မှုများ ရလာပါမည်။ တစ်ခု သတိချပ်ရန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်မှုတို့ နှင့် အစွမ်းတို့သည်- အောင်မြင်ခြင်း၊ ရှုံးနိမ့် ခြင်း စသော လောကဓံ တရားတို့နှင့် ကြုံတွေ့ ဆုံဆည်းရခြင်း၊ အောင်မြင်ပါက မာန် မာန တို့ ထောင်လွှား မိတတ်ခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ပါက ဒေါမနဿ တို့ ပေါ်ပေါက်ရတတ်ခြင်း တို့ကိုပါ နောက်ဆက် တွဲ ဖြစ်လာတတ်ပါ၏။
အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ် တွေးခေါ်ခြင်း ပညာကို ဦးတည်သော အတတ် ပညာ သည် လောကီ ပညာ အားဖြင့်လည်း- မိမိနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင်တို့၏ ကောင်းကျိုးကိုသာ စောင့်ရှောက် တတ်ခြင်း၊ ထိုမှ ဆက်၍ သစ္စာလေးပါး တရား တို့၏ အကြောင်းအကျိုးကို ဆက်စပ်သော ၀ိပဿနာ ပညာ သည် သံသရာမှ လွတ်ကြောင်း အထိ ထောက်ပံ့ပေး နိုင်ကြောင်းကို သတိထား သင့်သဖြင့်- မည်သည့် အတတ်ပညာကို မဆို လေ့လာ နေကြသော- မိတ်ဆွေ များ၊ ညီငယ်၊ ညီမငယ် များကို နှစ်သစ် လက်ဆောင် အဖြစ် မျှဝေ ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Labels: Knowledge, Skill, အတတ်နှင့် ပညာ
အတတ်သည် talent ကို ညွှန်သော ဗုဒ္ဓဟူးသဘာဝအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပညာသည် ထိုးထွင်းသိမြင်မှု wisdom ကို ညွှန်သော ကြာသာပတေးသဘာဝအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မှုကို အင်္ဂါအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စွဲမြဲစူးနစ်မှုကို စနေအဖြစ်လည်းကောင်း ကွဲပြားယူဆထားကြောင်းပါဆရာ။ အတတ်မြန်သော်လည်း အသုံးမချတတ်သောကြောင့် လူ့နောက်ကျသူများ၊ ပညာရပ်တစ်ခုကို ထူးထူးချွန်ချွန်မကျွမ်းကျင်ဘဲ အသုံးချပညာနှင့် စီမံမှုပညာနားလည်သဖြင့် ကြီးပွားရသူများတို့ကို ဇာတာတွင်း ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသာပတေး စနေ အင်္ဂါ သဘာဝများအရ ခွဲခြမ်းဖူးပါသည်ခင်ဗျာ။ ယူဆချက်မှန်မမှန်နှင့် ဖြည့်သွင်းဝေဖန်ပါရန် အကြံပြုပါသည် ဆရာခင်ဗျား။
ကိုပခန်းရေ.. ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ စနေ အယူအဆ တွေမှန်ပါတယ်။ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာနိုင်မှု Analytical capability က အဓိက အားဖြင့် ဗုဒ္ဓဟူးရဲ့ တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါဟာ Astute ဆိုတဲ့ သွက်လက် ချက်ချာမှုကို တာဝန် ယူပါတယ်။ နည်းပညာ အသစ်တွေ (အထူးသဖြင့် I.T လိုမျိုး) က- ရာဟု နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး၊ ဇွဲကောင်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စနေဟာ သုတေသန တွေကို တကယ် လက်တွေ့ ဖြစ်ပေါ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကို ကူညီပါတယ်။
ချမ်းမြေ့ပါစေ။ နျူမာန် (မိုးတား)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား အမြဲတမ်း လာရောက်ဖတ်မှတ် လေ့လာလျှက်ပါ။ စာပေကျမ်းဂန်ထက် ကိုယ်တိုင် တွေးခေါ်နိုင်တာကို လေးစားအတုယူလျှက်ပါ။
လူတွေရဲ.အတတ်အသိပညာ ဆိုတာတကယ်တော့ အာရုံ သိလေး သက်သက်မျှသာ ဖြစ်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်ပညာတွေအပေါ် မာန်မာန၊မစ္ဆရိယ စေတသိတ်တွေနဲ. တန်ဆာဆင်လိုက်ရင်တော့ သတိတရားကင်းမဲ့တဲ့ အပြုအမူ၊ တကဲ့စစ်မှန်သောတတ် သိပညာရှင်တို.ရဲ.အမူအကျင့်နဲ.ဆန်.ကျင် ပြီးသားလို.မှတ်ယူမိပါတယ်။ ဆရာ့ ရေးသားမှုအပေါ် အထူးဝေဘန်ဆွေးနွေး စရာမရှိပါ။ ပညာရှင်တို.မည်သည် တတ်သိ လေ သတိတရားဖြင့် ဆင်ချင်လေ၊ ရိုးကျိုးစွာနေထိုင်ကျင့်ကြံလေ ဆိုမှ အနှစ်သာရ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်ဆရာ။ မည်သူ.ကိုမျှမရည်ရွယ်ပါ။ သတိဖြင့် ကျင့်ကြံနေထိုင်ရန် ဆိုဆုံးမသော မြတ်စွာဘုရား၏တရားကိုသာ အောင်းမေ့ ဆင်ခြင်ရင်း အထူးသဖြင့်ပညာသင် လူငယ်များအတွက် ရိုးသားစွာ ဖြည့်စွက် ပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား..
ဆရာ ဦးရဲမြင့် ခင်ဗျား။ အင်မတန် တန်ဘိုးရှိပြီး သတိထားသင့်တဲ့ ဆိုဆုံးမ အကြံပေးမှု ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ အနတိ မာနီက. မာန်မာန မရှိသည်လည်း ဖြစ်ရာ၏ ဆိုတဲ့ မေတ္တာသုတ္တန်မှ မြတ်စွာဘုရား ရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်နာဘို့ ကြိုးစားပါ့မယ် ခင်ဗျား။ လူတွေအတွက် အခုလို သိသင့် သတိထားသင့်တာကို ညွှန်ပြမှု များကို အမြဲ လေးစားပြီး လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ခင်ဗျား။ လေးစားလျှက်
ဆိုက်လင့် နဲ့ တွဲပြီးပြန်လည် ဝေမျှနိုင်ပါတယ် ကိုမှုးသော်- ချမ်းမြေ့ပါစေ။